Ọdịnaya Ahịa: Egwuregwu | Martech Zone
Ahịa ọdịnaya abụghị sayensị rọketi, mana ọ chọrọ nyocha, nka na atụmatụ iji bulie elele ahụ. Na isi ya, anyị na-ahụ na ndị ahịa anyị na-ede ihe dị mkpa, nke na-adịbeghị anya na oge na-aga n'ihu gbasara isiokwu ndị nwere mmasị. Anyị na-ahụ na anyị nwere ntọala nke ụzọ ntinye aka - ọdịnaya na-eduga na oku na-eme ihe nke na-eduga n'ịgbanwe. Anyị na-ahụ na onye ahịa ahụ anaghị ede naanị ihe ederede - ha na-ede ma na-arụpụta ọtụtụ ndị na-ajụ ase na ụdị mgbasa ozi iji ruo ha.
Enwere ụfọdụ iwu siri ike na ngwa ngwa maka igwu egwu ma merie na azụmaahịa ọdịnaya - dịka naanị mepụta ọdịnaya mbụ ma jikọta ọdịnaya ndị ọzọ nwere ikikere, ndị ama ama - mana ọ baghị uru ma ị bido na isiokwu web, blọọgụ, email, vidiyo… ha niile na-emecha rụọ ọrụ ọnụ, yabụ bido na ihe kachasị gị mma. Akụkụ dị mkpa bụ ide maka ndị na-ege gị ntị, kesaa ozi bara uru ma bụrụ akụ bara uru.
Ihe omuma a site na Ịzụ Ọha, nyocha na-elekọta mmadụ na nyocha nyocha nke na-enyere ndị ahịa aka nyocha, dee, bipụta, ma kwalite ọdịnaya ga-adọta ndị ahịa.
Tags: nyochaablog postsnyocha ọdịnayacontent MarketingEmenkwalitebipụtandị na -elekọta mmadụAkwụkwọ edemededee
Ọrụ Data na Onlinezọ Ntanetị Purzụta